Suudaan oo Albaabada Iskugu laabtay Xafiiska Telefishanka Aljaseera ee Khartuum • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / World News / Suudaan oo Albaabada Iskugu laabtay Xafiiska Telefishanka Aljaseera ee Khartuum
Suudaan oo Albaabada Iskugu laabtay Xafiiska Telefishanka Aljaseera ee Khartuum
Gollaha milateriga Suudaan ayaa amar ku bixiyay in albaabada la isugu laabo Xarunta Telfishanka Al-Jazeera, uu ku lahaa wadankaasi, gaar ahaan magaaladda Khartuum
Milaterigu waxay kaloo kala laabteen Aljazeera ruqsadii shaqo ee shaqaalaha Telefishanka sida uu sheegay telefishanka Aljazeera
” Go’aanka waxaa kujira in telefishanka lagala laabtay ruqsadii uu warark uu telfishanka iyo wariyayaashu kaga soo tebinayay wadanka Suudaan laga bilaabo maanta oo jimce ah” Sidaas waxaa lagu yiri qoraal ka soo baxay telefishanka.
Telefishanka Aljazeera oo laga leeyahay wadanka Qadar, waxaa uu si joogto ah u soo tebinayay bilihii la soo dhaafay mudharaadyada looga soo horjeedo gollaha milateriga Suudaan ee Xukunka ka tuuray madaxweynihi hore Cumar Xasan Albashiir.
Madaxda Xafiiska Aljazeera ee Suudaan Al-Musallami Al-Kabbashi ayaa wakaalada wararka ee AFP u sheegay in Milateriga ay ku amreen inay xiraan xafiiska balse ayan jirin Qoraal la soo gaarsiiyay. Waxaa uu sheegay inay ku wareejiyeen qalabkii iyo xafiiskii
Madaxda Gollaha Milateriga Suudaan Cabdifatax Al-Burhaan waxaa uu magaaladda Maka kaga qaybgalaya shirka Madaxda Carabta iyo Islaamka, kaasi oo ku baaqay boqorka Sucuudiga. Madaxa Milaterigu wuxuu hore u booqday wadamada Masar iyo Imaraadka , kuwaaso uu xiriir wanaagsan la leeyahay.
Wadamada Sucuudiga, Imaraadka, Masar iyo Baxrayn ayaa xiriirka u jaray Wadanka Qadar iyagoo ku soo rogay xayiraad dhulka, cirka iyo badda ah.